TOLL FREE09 446 446 852
Improve Your Food Processing Business
Daw Win Pyae Pyae Aung / 10 Students
Basic Course For Office Staff
U Soe MIn 15 Students
Dr.Myat Thu Thu Win 15 Students
Mary Belle Greenwell / 225 Students
Elizabeth Vaughn / 61 Students
U Soe MIn 10 Students
Martha Flowers / 150 Students
Ruth Louise Williams / 45 Students
Daw Win Pyae Pyae Aung 10 Students
A. T. Whitecotton / 154 Students
Sarah Norris / 164 Students
Helen Levings / 98 Students
The following faculties are Teaching Now !
Daw Win Pyae Pyae Aung
MBA, MPM, M.Sc.(Biotech) SCORE Expert Trainer and Consultant Candidate, IYFB Master Trainer Candidate
M.B.B.S (Ygn) , M.Med.Sc (Pharmacology) , Ph.D (Japan) Pharmacologist , Medical Adviser
Images of Myanmar Online Campus Teaching Platform
Teacher: U Pite Tin
Health Care Training Batch-2
Teacher: MOC ADMIN
Teacher: Myat Thu Win
Certified License IYFB Trainer-TOT
Teacher: Win Pyae Aung
Office Staff လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် မေးခွန်းများကို သင့်တင့်မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုနိုင်မှသာ အလုပ် Inter View လာရောက် ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
1. Basic Anatomy အခြေခံ ခန္ဓာဗေဒ
2. Basic Pharmacology အခြေခံ ဆေးဝါးဗေဒ
3. Nursing Care ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း
4. Practical လက်တွေ့ - တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး-
🎤ဂျပန်နိုင်ငံမှ Ph.D ဘွဲ့ရရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် AIMST University တွင် Senior Lecturer အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် Dr. Myat Thu Thu Win နှင့်အတူ ဝါရင့် ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုများက စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်း / Viber - 09-446 446 852
Teacher: Dr Lei Lei
Teacher: Dr. Maisie
Teacher: Daw Nancy
Teacher: Demo Student
" ရည်အသွေးကောင်းမွန် အဟာရပြည့်ဝ ဘေးကင်းတဲ့ စားသောက်ကုန်ဖန်တီးဖို့ "
MBA, MPM, M,Sc.(Biotechnology)
သင်တန်းကြားပေးမည့် ဘာသာရပ် ၄ ခု
၁။ Food Development (စားသောက်ကုန်အသစ်တီထွင်ခြင်း။)
၂။ Food Quality(စားသောက်ကုန်အရည်အသွေး)
၃။ Food Safety(အစားအစာဘေးကင်းရေး)
၄။ Food Processing (စားသောက်ကုန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း)တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမ-ဒေါ်ဝင်ပြည့်ပြည့်အောင် MBA, MPM, M.Sc.(Biotech) SCORE Expert Trainer and Consultant Candidate, IYFB Master Trainer Candidat
Basic Course For Office Staff (အခြေခံရုံးလုပ်ငန်းသင်တန်း)
အခြေခံရုံးလုပ်ငန်းကို လေ့လာသင်ယူလိုသည့် လူငယ်များအတွက် ပညာဒါနအဖြစ် (၁၈.၁၁.၂၀၂၁) မှ (၁၈.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် KMT Training Center မှ Teaching Video File များစီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Teacher: KMT Training Center
MOC Admin Webinar
Myanmar Online Campus Admin အဖွဲ့များ၏ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Teacher: U Soe Min
MOC Teaching Webinar
Myanmar Online Campus တွင်ပါဝင်သင်ကြားမည့် ဆရာများနှင့် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးခန်းဖြစ်ပါသည်။
MOC Platform Demonstration
Myanmar Online Campus တွင်သင်ကြားပို့ချမည့် ဆရာများနှင့် သင်ယူကြမည့် သင်တန်းသားများ စာသင်ခန်းအတွင်း သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြု၍ သင်ကြားသင်ယူနိုင်ရန် ရှင်းလင်းသရုပ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MOC Moodle Training Room
Myanmar Online Campus တွင် သင်တန်းဖွင့်၍ သင်ကြားမည့် ဆရာများ Moodle Application တွင်ပါရှိသည့် သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု Function များကို လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆွေးနွေးသင်ကြားပေးမည့် စာသင်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Online Campus isalearning platform where future owners of young people can learn Education, skills and knowledge. Anyone who wants to learn, no matter where they are in the countryside of Myanmar, can choose the subject they want to study. Effective and comprehensive teaching and learning with the support of technology will createabetter social environment with the development of human resources.
+95-9-446 446 852
Copyright © 2022 Myanmar Online Campus